China Pasteurizer & Sterilizer ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ngwaahịa | Higee
Iszọ dị iche iche nke Pasteurizer ma ọ bụ sterilizer dị ka Tunnel type pr plat sterilizer ka emebere ma hazie ya dịka ihe onye ahịa chọrọ maka ihe ọ beụ someụ ụfọdụ.
1.Tunnel Pasdị Pasteurizer-raygba Sterilizer
Akụrụngwa ahụ na - ekesa ịgbanye mmiri ọkụ, mmiri ọkụ na - eme ka mmiri jụrụ oyi, mmiri jụrụ oyi na - edozi ọgwụgwọ atọ ma ọ bụ ọgwụgwọ ọtụtụ, sterilization na oge dị jụụ dịka ihe onye ọrụ chọrọ, njikwa ugboro ugboro, njikwa akpaka na nnukwu akpaaka.
* Ọ na - ewepụta efere polypropylene (HTPP) dị elu na - eguzogide ọgwụ dị elu ma nakweere ihe ọkụkụ Japan. A na-eji igwe anaghị agba nchara rụọ fuselage ahụ.
* Akwa-mma plastic ntupu na yinye efere, nwere ike na-arụ ọrụ na elu okpomọkụ ruo ogologo oge (-98), obere-okwu elu okpomọkụ 104 ° C;
* Solid cone obosara-n'akuku nozulu, eruba nkesa bụ ọbụna na mụ, na ọnọdụ okpomọkụ mgbe nile;
* Comprehensive itinye n'ọrụ nke otutu ume okpomọkụ mgbake teknụzụ, ike ịzọpụta na gburugburu ebe obibi-echebe;
* Okpomọkụ mmetụta Pt100, elu n'ihe ziri ezi, ruo ± 0,5 ° C;
* Multi-usoro Nchikota, ezi uche usoro, nwere ike ijikwa a dịgasị iche iche nke ihe;
* Sterilization okpomọkụ na-achịkwa PLC ihuenyo mmetụ.
* Mkpokọta nhazi oge ugboro akakabarede akara, nwere ike gbanwee dị ka mmepụta usoro;
* Ọ na-onwem na akpaka nri na ịrụzu usoro nke na-abụghị okirikiri eyi karama, plastic akpa, n'elu katọn, karama karama, Mkpọ na ndị ọzọ na ngwaahịa, na ntughari ka akpaka erute mmepụta akara bụ ezigbo;
* Nye ndị ọrụ ọrụ nyocha nke nkesa ọkụ, jiri usoro ndị ọkachamara, nyochaa ntanetị nke mgbanwe okpomọkụ na usoro mmepụta.
* Na akpaka akara nke nwoke ịga ụlọ ọgwụ okpomọkụ, stepless ukpụhọde nke nwoke ịga ụlọ ọgwụ oge:
* Na-n'ọtụtụ ebe na a dịgasị iche iche nke bottled, mkpọ acid ihe ọ drinksụ drinksụ ọ drinksụ drinksụ, electrolyte ọ drinksụ ,ụ, mmanya, ngwa nri na ndị ọzọ na ngwaahịa nwoke ịga ụlọ ọgwụ na obi jụrụ;
* Akụrụngwa a nwere ike ịhazi dịka ọnọdụ ịga ụlọ ọgwụ na mmepụta ihe ndị ọrụ chọrọ n'ihu.
2.Pasteur efere sterilizer
Stkwa nri biya bụ nke na-ejikarị 72 ° C, 27PU uru (sterilization unit) teknụzụ egbu yist na ihe ndị ọzọ na-emetọ ihe ọ inụ inụ na biya, ka o wee nwee ike ịchekwa nri biya na oge nchekwa ogologo oge n'okpuru ọnọdụ nke ọnọdụ izu ụlọ kacha ala. Pasteurization emecha n'ime 30 sekọnd, na-enwe ezigbo uto na ekpomeekpo
A na-eji mmiri mgbapụta arụ ọrụ biya biya nke usoro gara aga ma zigara ya na sterilizer maka mgbanwe mgbanwe. Mgbe ahụ ọ na-abanye na ngalaba nwoke ịga ụlọ ọgwụ wee kpoo ya na mmiri ọkụ na 75 Celsius. Thezọ nke iri na asaa na-abanye na ngalaba njide na 72 Celsius C maka ịgba ọgwụ mgbochi okpomọkụ mgbe ọ bụla Mgbe mgbanwe mgbanwe ahụ gasịrị, mmiri mmiri 0-2 is na-eme ka ọ dị mma. A na-ezigara ngalaba ahụ dị jụụ n'okpuru 4 ℃ na tankị na-adịghị ọcha ma ọ bụ igwe na-ejuputa maka imeju.
Nke gara aga: Usoro ọgwụgwọ mmiri
Osote: Mmanụ flling igwe akara
Pasteurizer na Sterilizer